I-UN General Assembly eNew York yahlasela abaholi bomhlaba bebukele: "Ungakhethi Ukuqothulwa! Siyini izaba zakho?"
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Uhambo lokuzijabulisa » I-UN General Assembly eNew York yahlasela abaholi bomhlaba bebukele: “Ungakhethi Ukuqothulwa! Zithini izaba zakho?”
Uhambo lokuzijabulisa • Izindaba Ezintsha • Izindaba zikaHulumeni • Izindaba • Abantu • Ukusimama Izindaba • Ezokuvakasha • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
I-UN General Assembly eNew York yahlasela abaholi bomhlaba bebukele: “Ungakhethi Ukuqothulwa! Zithini izaba zakho?”
U-Aïssa Maïga uqopha izwi le-dinosaur yopopayi yekhompyutha enefilimu entsha emfushane yomkhankaso we-UN Development Programme othi Ungakhethi Ukuqothulwa ukuze aqwashise ngokushintsha kwesimo sezulu. Isithombe: Simon Guillemin
Lingena lingena eHholo Lomhlangano Lomhlaba eliyisakhiwo sodumo, elidume ngezinkulumo eziwumlando zabaholi abavela emhlabeni wonke, idayinaso elimangalisayo litshela izethameli nezicukuthwane ezishaqekile nezididekile ukuthi “sekuyisikhathi sokuthi abantu bayeke ukubeka izaba futhi baqale ukwenza izinguquko” ukuze bakhulume isimo sezulu esibucayi.
Ifilimu yokuqala ngqa ukwenziwa ngaphakathi kwe-UN General Assembly.
I-United Nations Development Programme (UNDP) iletha idayinaso enonya, ekhulumayo endlunkulu yeNhlangano Yezizwe ukuze igqugquzele abaholi bomhlaba ukuthi bathathe izinyathelo ezengeziwe zesimo sezulu,
Efilimini emfushane eyethulwe namuhla njengengqikithi yomkhankaso omusha wale nhlangano othi 'Ungakhethi Ukuqothulwa'.
“Okungenani sasinenkanyezi esemkhathini,” kuxwayisa idayinaso, ibhekisela embonweni odumile echaza ukushabalala kwama-dinosaurs eminyakeni eyizigidi ezingu-70 edlule. “Sithini isizathu sakho?”
Le filimu eqala ngqa ukwenziwa ngaphakathi kwe-UN General Assembly kusetshenziswa izithombe ezenziwe ngekhompyutha (CGI) ihlanganisa osaziwayo bomhlaba wonke bezwakalisa i-dinosaur ngezilimi eziningi, okuhlanganisa nabalingisi. U-Eiza González (Spanish), U-Nikolaj Coster-Waldau (Danish), kanye U-Aïssa Maïga (isiFulentshi).
Idayinaso iyaqhubeka nokugqamisa ukuthi ukwesekwa kwezimali kwezinto zokubasa ezimbiwa phansi ngoxhaso - imali yabakhokhintela esiza ukugcina izindleko zamalahle, uwoyela negesi ziphansi kubathengi - kungenangqondo futhi akunangqondo lapho kubhekene nesimo sezulu esishintshayo.
“Cabanga ngazo zonke ezinye izinto obungazenza ngaleyo mali. Emhlabeni wonke abantu baphila ngobumpofu. Awucabangi ukuthi ukubasiza kungaba nengqondo ngaphezu… ukukhokhela ukushabalala kwezinhlobo zakho zonke?” i-dinosaur ithi.
"'Ifilimu iyajabulisa futhi iyaheha, kodwa izindaba ekhuluma ngazo azikwazi ukuba bucayi kakhulu," kusho u-Ulrika Modéer, iNhloko ye-UNDP's Bureau for External Relations and Advocacy. “UNobhala-Jikelele we-UN ubize inkinga yesimo sezulu 'njengendlela ebomvu esintwini.' Sifuna ifilimu inandise, kodwa futhi sifuna ukuqwashisa ngokuthi isimo sibucayi kangakanani. Umhlaba kumele uqinise isandla ekubhekaneni nesimo sezulu uma sifuna ukuphumelela ekugcineni iplanethi yethu iphephile ukuze izizukulwane ezizayo.”
Umkhankaso we-UNDP othi 'Ungakhethi Ukuqothulwa' kanye nefilimu ihlose ukugqamisa uxhaso lukaphethiloli wezinto ezimbiwa phansi kanye nendlela ekhansela ngayo inqubekelaphambili ebalulekile ekuqedeni ukuguquguquka kwesimo sezulu futhi iqhuba ukungalingani ngokuzuzisa abacebile.
Ucwaningo lwe-UNDP olukhishwe njengengxenye yomkhankaso lubonisa ukuthi umhlaba uchitha imali emangazayo yamaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-423 minyaka yonke ukuxhasa uphethiloli wezinsalela zabathengi - uwoyela, ugesi ophehlwa ukushiswa kwezinye izinto zokubasa ezimbiwa phansi, igesi, namalahle.
Lokhu kungakhokhela izindleko zokugomela i-COVID-19 kuwo wonke umuntu emhlabeni, noma kukhokhele inani eliphindwe kathathu lemali yonyaka edingekayo ukuze kuqedwe ubumpofu obudlulele emhlabeni.
Umkhankaso kanye nefilimu kunethemba lokuthi ngezinye izikhathi izinkinga eziyinkimbinkimbi nezobuchwepheshe eziphathelene ne-Fossil Fuel Subsidies kanye nesimo esiphuthumayo sezulu zifinyeleleke kalula. Ngezenzo ezahlukahlukene umphakathi umenywa ukuba uzithathe, inhloso ukufundisa nokuzwakalisa izwi kubantu emhlabeni wonke.
Ifilimu ethi 'Ungakhethi Ukuqothulwa' idalwe ngokubambisana ne-Actista Los Angeles (isikhungo sokudala esiwine imiklomelo eminingi), u-David Litt (umbhali wenkulumo kaMongameli waseMelika u-Barack Obama) kanye ne-Framestore (isitudiyo sokudala ngemuva kuka-James Bond, Guardians of the I-Galaxy, i-Avengers End Game). UWunderman Thompson wakha i-digital ecosystem yesinyathelo sokunikeza amandla abantu emhlabeni wonke ukuthi bathathe isinyathelo kuyilapho i-Mindpool ikhiqiza ithuluzi elihlanganisiwe lokubandakanya ubuhlakani benkundla yomkhankaso.
I-PVBLIC Foundation, inhlangano esungulwe engenzi nzuzo ehlanganisa abezindaba, idatha, nobuchwepheshe ukuze kube nentuthuko esimeme kanye nomthelela womphakathi emhlabeni jikelele, ihlinzeka ngezokuxhumana zamasu kanye nokwesekwa kwabezindaba. Imikhiqizo eqinile ye-BOTTLETOP kanye nenhlangano yabo ethi #TOGETHERBAND nayo ibambisana ne-UNDP futhi izokhiqiza okuthengiswayo okukhethekile neciko lase-Brazil i-Speto ukuze kuzuze umkhankaso.
Thola okwengeziwe mayelana nomkhankaso ku www.dontchooseextinction.com